Izindaba - Siyakuhalalisela! Enye i-Diesel Genset Yezindawo Zokuthengisa Ifika Esizeni SeKhasimende
Halala! Enye i-Diesel Genset Yezindawo Zokuthengisa Ifika Esizeni SeKhasimende
Ngemuva kokuphasa ukuhlolwa kobuchwepheshe, i- isethi ye-generatorumkhiqizi uKentpower Electromechanical uyithumele ngokushesha. Manje isethi ye-generator enefreyimu evulekile ithunyelwa ku-real estate njengomthombo wamandla wesipele ophephile futhi onokwethenjelwa wokunikeza amakhasimende ukukhishwa kwamandla okuphephile, okuzinzile nokwethembekile.
I- gensetifika endaweni yekhasimende, idlulise isheke lokwamukela, futhi isendaweni. Ngasikhathi sinye, onjiniyela beKentpower baphinde balungisa lo mshini okokuqala, bayalela ikhasimende ukuthi liwusebenzise futhi liwusebenze, ekugcineni bawuhambise kahle kumakhasimende.
Ngokuvamile, amasethi we-generator kadizili angasebenza ngokuqhubekayo amahora angu-12 namandla okukhipha ngaphansi kwezimo zemvelo ezilandelayo:
1.Ambient lokushisa: 5 ～ 40 ℃
2. Umswakama ohlobene: <85% (25 ℃)
3. Ukuphakama: <1000 metres
4. Ukuthambekela kweLongitudinal lapho usebenza: <10 degrees
5. Alukho uthuli oluqhubayo, igesi elonakalisayo elonakalisa ukufakwa kwensimbi, nezindawo ezinobungozi bokuqhuma
Amasethi akhiqiza amandla eKentpower athuthukile ekukhiqizeni futhi aklanywe kahle. Zinezici ezivelele njengobuchwepheshe obuvuthiwe, ukusebenza okuzinzile, ukonga ezomnotho, nokusebenza okuhlala isikhathi eside. Zisetshenziswe kabanzi ekukhiqizeni izimboni nezolimo, ukwakhiwa kobunjiniyela, ukuxhumana kwamandla, ezempilo nezempilo, ihhovisi lezentengiso, kanye nezicelo zezinsizakalo zomphakathi.